Mandika ny Lalàn’ny Fahasalamana sy ny Fahatsoram-Po | EGW Writings
Toko 148 — Fitiavana MarinaToko 149 — Ny Fomba Diso HisakaizanaToko 150 — Fikambanana amin’ny Tsy MpinoToko 151 — Ilaina ny Torohevitra sy ny Tari-dalanaToko 152 — Ny Fanambadiana Aloha LoatraToko 153 — Ireo Karazam-Panambadiana RoaToko 155 — Ny Andraikitry ny FanambadianaToko 156 — Fandanjalanjana Tsara sy Fifehezan-tena ao anatin’ny FanambadianaToko 157 — Ny Ohatr'i Isàka
Fitiavana tsy MasinaTsy Firaharahana ny TorohevitraIreo Toetry ny Tena FitiavanaMikatsaka ny Tari-Dalana avy amin’Andriamanitra
Miambina manokana ireo izay manokana ny ampaham-potoana betsaka amin’ny alina hifampiresahan’ny mpifankatia ny anjelin’i Satana. Raha nanokatra ny masony izy ireo, dia mety hahita anjely iray mandray an-tsoratra ny teny sy ny fihetsiny rehetra. Voadika ireo lalàn’ny fahasalamana sy fahatsoram-po. Mety kokoa raha ny sasany amin’ireo ora maro lany amin’ny fisakaizana no lany ao amin’ny fiainam-pianakaviana. Kanefa amin’ny ankapobeny, ny fanambadiana no mamarana ny fanoloran-tena rehetra naseho nandritra ny andro fisakaizana! - MYP 457.2 .HAT 402.2
Ireo oran’ny fanaranam-po amin’ny mamatonalina, amin’izao andron’ny fitondran-tena maloto izao, dia matetika mitarika ho amin’ny faharavan’ny roa tonta izay manao izany. Ravoravo i Satana, ary afa-baraka Andriamanitra rehefa manala baraka ny tenany ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny laza tsara sy ny voninahitra dia natao sorona eo ambanin’ny odin’io fifanintonana tsy masina io, ary ny fanambadian’izany olona izany dia tsy azo ambara ampahibemaso ho nahazo ny fankatoavan’Andriamanitra. Nivady izy ireo satria ny filàna no nanetsika azy, ary rehefa tapitra hatreo ny maha-zava-baovao ny fanambadiana dia hanomboka hahatsapa ny zavatra nataony izy ireo. Enim-bolana taorian’ny nanambarana ny voady dia efa niova ny fihetseham-pon’izy ireo amin’ny samy izy. Tao amin’ny fiainam-panambadiana ny tsirairay dia samy nianatra bebe kokoa momba ny toetr’ilay nofidiny. Mahita tsy fahatanterahana ny tsirairay, izay toa tsy hita nandritra ny fahajambana sy hadalana teo amin’ny fiarahana teo aloha. Tsy mamatotra azy ireo fanomezan-toky teo amin’ny alitara. Ny vokatry ny fanambadiana an-kamehana, eny, na dia amin’ireo milaza ho olon’Andriamanitra aza, dia ny fisarahana, ny fisaraham-panambadiana ary ny fikorontanana lehibe ao amin’ny fiangonana. - MYP 457.3.HAT 402.3